﻿कारखाना मेरो करिअरलाई परिवर्तन गर्ने सिनेमा हो ।-CineHotline.com
﻿कारखाना मेरो करिअरलाई परिवर्तन गर्ने सिनेमा हो ।
– नविन लम्साल (अभिनेता)
काठमाडौं । नविन लम्साल नयाँ पुस्ताका प्रतिभावान अभिनेता हुन् । चलचित्र राहदानीबाट उनी नायकका रुपमा नेपाली रजतपटमा उदाएका हुन् । अस्कर कलेज अफ फिल्म स्टडिजबाट अभिनयमा स्नातक गरेका उनी मोडलिङमा पनि स्थापित छन् । दर्जनौ प्रोडक्ट र पाँच दर्जन म्युजिक भिडियो गरिसकेका नविनले अभिनय गरेको अर्को चलचित्र कारखाना यतीबेला प्रदशर्नको संघारमा छ । यो चलचित्रमा उनी दुई मध्य एक मुख्य भूमिकामा छन् । अमरदीप सापकोटा निर्देशित चलचित्र कारखानाका बाँकी दुई मुख्य कलाकारमा शुशिल श्रेष्ठ र वर्षा शिबाकोटी हुन् । यसमा नविनको काम बारे छोटो कुराकानी ।
कारखाना कस्तो चलचित्र हो ?
यो विशुद्ध नारी प्रधान चलचित्र हो । एउटा महिलाले गलत निर्णय लिँदा उसले केसम्म भोग्नु पर्छ भन्ने विषय यो चलचित्रमा उठाउन खोजिएको छ ।
चलचित्रमा गलत निर्णय लिने पात्र को रहेछ ?
चलचित्रमा दुई मुख्य महिला पात्र छन् वर्षा शिबाकोटी र मौसमी मल्ल । जसमा दुबै बीचको संघर्ष छ । यी दुईको आपसी हठ र एउटाको गलत निर्णयले चलचित्रले विभिन्न मोड लिन्छ ।
चलचित्रको मुख्य बिषयबस्तु के हो ?
यो चलचित्र एउटा नविन बिषय कोखमा भाडा लगाउने कार्य (सेरोगेसी) उठान गरिएको छ । चलचित्र पनि सेरोगेसीमा केन्द्रित छ ।
यसमा नविनको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
चलचित्रमा म उच्च धनाढ्य परिवारको व्यापारी युवाको भूमिकामा छु । आफुले मन पराएको युवतीलाई पाउन र आफ्नो व्यापारलाई अघि बढाउन साम, दाम, दण्ड, भेद हरेक कुरा अपनाउन पछि नपर्ने भूमिकामा छु । दर्शकलाई मैले एउटा नयाँ काम दिन खोजेको छु ।
नयाँ काम भन्नाले ?
चलचित्र राहदानीमा मैले कलेज पढ्ने एउटा सँघर्षशिल विधार्थीको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । यस्तै भूषण दाहाल निर्देशिन मेरो आउन लागेको चलचित्र ओपन विन्डोमा पुरुष समलिँगी चरित्रमा छु । यो चलचित्र कारखानामा उच्च परिवारको व्यापारी युवाले पैसाको लागि केसम्म गर्न सक्छ भन्ने भूमिका मैले निर्वाह गरेको छु । यसमा म वर्षाको नजरमा असफल प्रेमीको भूमिकामा छु ।
नविनको अभिनय करिअरलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्ला त ?
मैले यसमा राम्रो काम गरेको छु । दर्शकलाई मेरो चरित्रबाट सन्तुष्ट पार्नेमा म विश्वस्त छु । म हरेक चलचित्रमा फरक चरित्र निर्वाह गर्ने पक्षमा रहन्छु । अब आउने चलचित्रहरुमा पनि म फरक भूमिकामै छु ।
Give Your Opinion On "﻿कारखाना मेरो करिअरलाई परिवर्तन गर्ने सिनेमा हो ।"